IDDSI - Myanmar
HomeIDDSI Framework Around the World Myanmar
IDDSI is now seeking volunteers to be part ofanewly formed Myanmar Reference Group, representing diverse stakeholders including speech-language pathologists, health care professionals, food industry representatives, school and care facility chefs, patients with feeding and swallowing disorders and their caregivers. Previous involvement in IDDSI guideline development or implementation is notarequirement. For more information, contact the Myanmar IDDSI Reference Group.
မြန်မာ စားမြို ရေး ခက်ခဲသူတို့၏ အစာ ရေစာ များ စံ နှုံးသတ်မှတ်ရေး ကိုးကားအဖွဲ့ သည် မြန်မာ့ ကနဦး ကိုးကားအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး ဤအဖွဲ့၏ ဘက်စုံ ရှုထောင့်စုံ မှ ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ် ဆောင် နိုင်ရန် အဘက်ဘက်မှ စားမြိုရေးနှင့် သက်ဆိုင်သူများနှင့် ပညာရှင်များ ပါဝင် နိုင်ရန် အတွက် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၊ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျောင်းဆောင် နှင့် ဆေးရုံ စားဖိုမှူး များ၊ စားမြိုရေး အခက်အခဲရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့ ၏ မိသားစုဝင်များ အပါအဝင်၊ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများအား ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ စားမြို ရေး ခက်ခဲ သူတို့ ၏ အစာ ရေစာ များ စံ နှုံးသတ်မှတ်ရေး လမ်းညွှန် နှင့် ပတ်သက် သော အတွေ့ အကြုံ ရှိ ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဆက်လက် စုံစမ်း မေးမြန်းလိုပါက မြန်မာ စားမြို ရေး ခက်ခဲ သူတို့ ၏ အစာ ရေစာ များ စံ နှုံးသတ်မှတ်ရေး ကိုးကားအဖွဲ့ ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Reference Group မြန်မာ စားမြို ရေး ခက်ခဲ သူတို့ ၏ အစာ ရေစာများ စံနှုံးသတ်မှတ်ရေးကိုးကား အဖွဲ့
Description of current IDDSI implementation status Myanmar Reference Group is recently started by Maan Sukte, MA, CCC-SLP and Dr. Seinn Mya Mya Aye, neurologist.
မြန်မာ စားမြို ရေး ခက်ခဲ သူတို့ ၏ အစာ ရေစာများ စံနှုံးသတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ကို စကားပြော ကုထုံးပညာရှင် ဒေါ် ကျင်းခန့် မန်း နှင့် ဦးနှောက် နှင့်အာရုံကြော အထူးကုဆရာဝန် ဒေါ် စိမ်းမြမြ အေး တို့ဖြင့် ကနဦး ဖွဲ့စည်းထား ပါသည်။
အဓိက ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်များ Maan Sukte, MEd., MA, CCC-SLP
ဒေါ် ကျင်းခန့် မန်း - စကားပြော ကုထုံးပညာရှင်
Dr. Seinn Mya Mya Aye
ဒေါ် စိမ်းမြမြ အေး ဦးနှောက် နှအာရုံကြော အထူးကုဆရာဝန်
ဆက်သွယ်ရန် Contact Email
Is thereacurrent registry of IDDSI users in Myanmar?
စားမြို ရေး ခက်ခဲ သူတို့ ၏ အစာ ရေစာ များစံ နှုံးများ ကို လက်ရှိ အသုံးပြုသူများ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်း ရှိ ပါသလား?
ဆက်လက် လေ့လာရန် In process.